मेलम्ची खानेपानी आयोजना : ठेकेदारको २ अर्ब ५६ करोड जफत
श्रावण ७, २०७६ ०२:११:१४
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बैंक धरौटी जफत गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । गत पुुस २ गते सिएमसीले मेलम्चीको ठेक्का एकतर्फी रूपमा तोडेपछि सरकारले यसको सबै प्रकारको बैंक धरौटीवापतको रकम रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त रकम खुला गर्नुपर्ने र आफूले लैजान पाउनपर्ने माग गर्दै ठेकेदार कम्पनीले पाटन उच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा पाटन अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको र सिएमसीको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको आएको छ । अदालतले बैंक धरौटी रोक्ने सरकारी निर्णयलाई नै बैधता दिएको छ ।
अब यो आदेशपछि ३ दिन (डिसेम्बर ३१) भित्र ठेकेदार कम्पनीेले आफ्नो धरौटी नवीकरण गर्नुपर्ने छ । ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम नवीकरण नगरे यो रकम सबै नेपाल सरकारको हुने छ । यसको धरौटी नवीकरण गर्नुपर्ने मिति ३ दिनलाई मात्रै रहेको छ । यदि यो कम्पनीले साढे दुई अर्बको धरौटी जोगाउन खोज्यो भने यसैबाट काम अगाडि बढ्न सक्छ ।
होइन भने यसको रकम सरकारले पाउने र नयाँ ठेकेदार छनोट गरेर मेलम्ची खानेपानीको काम अगाडि बढाइने खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यराज कँडेलले बताए । उनका अनुसार अदालतको आदेशबाट अब मेलम्चीको काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले परफरमेन्स, बिड, मोविलाइजेशनसहितका नौ प्रकारको शीर्षकमा यस्तो रकम जम्मा गरेको छ ।
सुनचाँदीको भाउ घटयो
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीकाे मूल्य बढ्याे
कृषि विकास बैंकमा जागिर खुल्यो
कृषि विकास बैक लिमिटेडले विभिन्न पदमा ३ सय ८४ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ कर्मचारी दरबन्दीमा रिक्त रहेको विभिन्न तहमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न दरखास्त आव्हान गरेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
असार २५, २०७६ हेटौंडा खबर
बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य रु २०० ले घटेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
ट्रक र मोटरसाइकल ठोकिँदा एक जनाको ज्यान श्रावण ६, २०७६ 58
सलमान र आफ्ना पूर्वप्रेमीसँग किन बोल्छिन् क्याटरीना कैफ?
ब्रत बसेको दिन यौन–सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?
‘बजरंगी भाइजान’की मुन्नी यस्ती बनिन् ( १०तस्वीर)
एक युवती कालिगण्डीकी नदीमा बेपत्ता
सलमान र आफ्ना पूर्वप्रेमीसँग किन बोल्छिन् क्याटरीना कैफ? श्रावण ६, २०७६
‘बजरंगी भाइजान’की मुन्नी यस्ती बनिन् ( १०तस्वीर) श्रावण ६, २०७६
प्रियंका कार्कीको चर्चा बिकिनीमा! श्रावण ६, २०७६
जब किसानले गाईको थुनामा लगाए श्रीमतीको ब्रा